Mianara momba ny mpiasa mahatalanjona »University of Hodges
Fampianarana ambony ampianarin'ireo matihanina manam-pahaizana
Hodges U dia manolotra fanabeazana tokana izay tsy hita na aiza na aiza, na mahazo fampianarana any amin'ny campus ianao, na amin'ny Internet, na amin'ny endrika mifangaro. Fa maninona Ny Faculty, Faculty Faculty ary ny Staff dia manana tanjona iray - hanampy anao hahomby! Ao Hodges, izahay dia mahatakatra ny fanambin'ny mpianatra olon-dehibe izay manana andraikitra amin'ny asa aman-draharaha sy ny fianakaviana. Izany no antony nivoaranay hanomezana anao ireo fitaovana ilainao hahomby amin'ny lafiny fanabeazana sy amin'ny asanao.
Ny Deans isaky ny sekolinay dia manolo-tena amin'ny fahombiazanao. Manokana fotoana hihaonana aminao izy ireo hanampiana amin'ny famahana ny olana atrehinao. Ny politikan'ny varavarana misokatra dia midika fa afaka miditra avokoa ny Deans tsirairay avy. Miangavy anao azafady, na dia hampahafantatra ny tenanao fotsiny aza. Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, maniry ny hahatratraranao ny tanjonao amin'ny fanabeazana ny Tomponay! Avelao izahay hanampy anao eny an-dalana.
Miaraka amin'ireo mpikambana Faculty anay dia ho hitanao ireo mpampianatra sy mpampianatra mampiankina izay manome ny oniversite tsirairay izay mendrika anao. Ny haben'ny kilasinay madinidinika dia manamora ny fahazoana ny sain'ny tena ilaina mba hahatratraranao ny tanjonao amin'ny fanabeazana sy ny asa. Ny fianarana dia zava-bita mandritra ny androm-piainana ary eto izahay hanohana anao rehefa mitombo ny filanao fahalalana bebe kokoa. Fanampin'izany, satria ny mpikamban'ny anjerimanontolo antsika dia za-draharaha amin'ny sehatra ampianariny, ianao dia hianatra bebe kokoa noho ny teoria ary ny ankamaroan'ny zavatra ianaranao dia azo ampiharina amin'ny toerana misy anao ankehitriny.
Ho anao ny mpiasa eto aminay. Avy amin'ireo niarahaba anay hatramin'ny fidiran'ny fanampiana ara-bola sy ny mpiasan'ny foibe serivisy veterans - nasaronay anao. Ny mpiasa eto dia eto hanampy anao isaky ny mandeha, na dia mihoatra ny diplaomanao aza.
Fikarohana ny lahatahiry mpiasa